Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguNiamh
Umgama nje oyi-2km ukusuka kwidolophu entle yaseKenmare, indlwana yethu esecaleni kwenduli yeyona ndawo ifanelekileyo yokuhlola iRingi yeBeara, iRing of Kerry okanye iWild Atlantic Way. Isanda kuhlaziywa ngokutsha inomoya wangoku womoya ngelixa igcina wonke umtsalane wendlu yamatye.
Kumgangatho ongezantsi kukho ikhitshi kunye negumbi lokuhlala elinendawo entle, enkulu yeziko enendawo yokutshisa iinkuni. Umgangatho ophezulu unegumbi lokuhlambela (ishawa kunye nebhafu) kunye negumbi elibanzi eliphindwe kabini elinemibono emangalisayo. Kukho izifudumezi zombane kwigumbi ngalinye kwakunye nesitovu. Ipakethe yokuqalisa inikwe isitovu.
Indlu yangasese yindawo yoxolo ebekwe kude kwiindlela ezinkulu. Izolile kwaye ingasese ivumela iindwendwe ukuba zithathe ubuhle kunye nendalo macala onke kwaye zonwabele emaphandleni. Iinyamakazi ziindwendwe ezihlala rhoqo kwindlwana efana nepheasants kunye nemivundla kunye nezinye izilwanyana zasendle.
Umbuki zindwendwe ngu- Niamh
Ikhaya lethu likufuphi kwaye siyakuvuyela ukunceda iindwendwe zethu ngayo nayiphi na imibuzo emikhulu okanye emincinci. Siyazingca kakhulu ngendlwana yethu kunye neKenmare kwaye siya kunceda ngayo nayiphi na indlela ukuqinisekisa ukuba uyonwabela zombini njengoko sisenza. Sobabini sisuka kwindawo kwaye sinokunika iingcebiso ezininzi malunga nemisebenzi kunye nokubona indawo.
Ikhaya lethu likufuphi kwaye siyakuvuyela ukunceda iindwendwe zethu ngayo nayiphi na imibuzo emikhulu okanye emincinci. Siyazingca kakhulu ngendlwana yethu kunye neKenmare kwaye si…